BULUUQUL MARAAM FREE DOWNLOAD
Xadiiska nacnihiisu wuxuu noqonayaa, dukhsiga labadiisa baal midna waxaa ku jirta sun midna dawaa ku jirta. Akhri Xadiiska 5aad, Insha Allah. Asxaabu Sunanka ayagana waxaa u sugnaaday oo xadiiskan ay ku weriyeen: Ilmaha yar markuu soo dhasho in wax la nuugo yaa baray..? Buluuqul Maraam Casharka 18aad Sh. Markaa, markuu cabitaan ku dhaco wuxuu gelinayaa kan suntu ay ku jirto, kan dawadu ay ku jirtana kor buu u haynayaa. Wuluuq waxaa la yiraahaa waxyaalaha carrabka wax ku cabba, sida bisadda iyo ugaadha iyo eygiyo kuwaasoo kale, ku cabidda ay biyaha iyo wixii la mid ah carrabka ku cabbaan ayaa wuluuq la yiraahaa.
Buluuqul Maraam – Shariif Cabdi Nuur – Addacwah
Cabdillahi, Cabdiraxman iyo Usaamah, saddex kala dardaran bay ahaayeen oo kulligood daciif bay wada ahaayeen. Buluuqul Maraam Casharka 12aad Sh. Buluuqul Maraam casharka 7aad Sh. Marka xukunku wuxuu noqonaayaa [haddii] raggiyo haweenku intay isla galaan musqusha- dabcan labadii isqabta weeyaan- [oo] ay iskula qabeystaan weelkana dhexdooda intay dhigtaan wada dardarsadaan inaynan dhib lahayn.
In kastoo taasi jirto, xadiisku wuxuu leeyahay shawaahid oo xadiisku waa saxiix.
Tanu markaa labadii riwaayo, riwaayadii Muslim ee ugu horreeysay iyo tii Bukhaari bay isku dartay oo labada arrimood bay midba gaarkeed u mancinaysaa reebaysaa ; inuu biyihii fadhiyey ku kaajo gaarkeed bay u nahyidey, biyihii fadhiyey inuu janaabo kaga dhex qabeysto oo dhex galana gaarkeeday u nahyiday reebtay.
Buluuqul Maraam Casharka 24aad Sh. Xadiiska nacnihiisu wuxuu noqonayaa, dukhsiga labadiisa baal midna waxaa ku jirta sun midna dawaa ku jirta.
Waxaa jira laba nin oo asaxaabo ahoo midkoodba arrintaa laga weriyey, oo midkood waxaa la yiraahaa Cabdullahi ibn Sarjis, ka kalena waxaa la yiraahaa AlXakam ibn Camr al Qifaarii, — radiyal Laahu canhum- labadaa midkood inuu yahay ayey u eg tahay. Buluuqul Maraam Casharka 19aad Sh. Ibn Cumar- radiyal Laahu canhumaa- waxaa laga weriyey in uu yiri: Laakiin labada xadiisba, xadiiska Sawbaan iyo Abuu Umaamah labadiisa riwaayaba waa daciif, kol haddii uu daciif yahayna xukun lagama qaadanayo.
Alle- sarreeye- wuxuu yiri: Labada bakhti ayixii iyo mallayga weeyaan.
Sharax Abii Qadaata na magaciisu waa al Xaarith ibn Ribciyy. Saxiix alJaamic asSaqiir iyo qeyrkiiba.
Qaar badan oo maraaam yaryar ka mid ah baa waxay ku dhegayaan oo ku harayaan timaha dabadiisa hareeraheeda ku yaalla kolkaa eyga iyo bisadiyo waxaa la ogyahay waa is leefaanoo wixii wasakhee ku yaaliyo carrabkooday iskaga suuliyaan, markaa eyga hadduu dabadiisa meelahaa uu leefo waxaa afkiisa iyo carrabkiisa usoo gudbeysa ukumihii yaryaraa ee meesha ku yaallay haddii uu eygii markaa weel afka geliyo ama biyo uu cabbo ama qof uu afka ka dhunkado sida gaaladu yeelaan iyo sida ferenjiga iyo inta ku daydaa ay yeelaan weeyaane waxyaalahaas eyga afkiisa taabtay yaa ukumihiisi ay soo raacayaan.
Waxaa la mid ah tanaga iyo dhoonharaadda… marka weel weyn oo aashuumada waaweyn iyo haamaha waaweyn iyo sidaasoo kale ah muggiis ayaa qullah la yiraahaa. Biyaha fadhiya raakid na waa la yiraahaa waana isku macne, biyahaan soconin weeyaan, [qofkiin] Isagoo janaaba qaba biyihii intuu dhexgalo yaanu ku dhex qabeysanin. Buluuqul Maraam Casharka 27aad Sh. Buluuqul Maraam casharka 6aad Sh. Shawaahid waa wadarta Shaahid. Biyo badan oo meesha ka qaalib noqda baa lagu butaacinayaa.
Hadduu ey afka la galo weelkii oo uu afka geliyo markaas daahirinta la daahirinayaa waxa weeyaan inuu dhaqo todoba goor inuu dhaqo midda ugu horraysaayu ciid mid bbuluuqul daray ay tahay. Waa marka la helo weriye KALE oo isaguna xadiiska weriyey.
THUNDERDRUMS SCOTT FITZGERALD DOWNLOAD
Markaa biyihii fadhiyey ee uu ku kaajay waa inaanu ku qabeysan. Illeen Allaah- subxaanahuu wa tacaalaa- waxyaalahan isagaa abuuray sharciganna isagaa amray oo dejiyey. Laakiin haddii aan lagu dhex kaajin laguna dhex qabeysanin oo biyihii inta lasoo darsado musqusha lala tago oo sidaa lagu qabeysto taas marka dhib maleh. Illeen saxaabada- ridwaanul Laahi calayhim- kulligood waa wada caadiliin weeyaan oo Allaaba taskiyeeyey- ridwaanul Laahu calayhim- laakiin hadduu weriye raawi kale ahaan lahaa oo saxaabi aan ahayn xadiisku marqam daciif buu ku noqon lahaayoo sida fannu musdalaxil xadiis lagu yaqaano qofka mubhamka ah [aan magaciisa la sheegin] iyo qofka majhuulka [aan la garanayn] ahba riwaayadooda lama marwam.
Markaa laba aashuun bay noqonaysaa iyo laba haamood iyo wax sidaasoo kale ah ama laba kharbad oo waaweyn siduu Imaamu Shaafici- radiyal Laahu tacaalaa canhu- uu ku fasiray isagu. Rasuulkii Alle — sallal Laahu calayhi wasallam- badda ayuu wuxuu ka yiri: Biyahaas la sheegayaana waa biyihii yaraa.
Buluuqul Maraam casharka 2aad Sh. Buluuqul Maraam Casharka 16aad Sh. Sidaa Ibn Cabbaas u weriyey oo kale ayey Maymuunana iyaduna qisadan u werisay.
Tirmidi isna waxaa u sugnaatay oo uu ku yiri:
TANGAN KUAT YANG MEMEGANGKU NIKITA MP3 DOWNLOAD
KOHOMADA IKMANATA MAHATH WENNE DOWNLOAD FREE
MAAF DARI HATI SOFAZ MP3 DOWNLOAD FREE
TOBAT SOTO BABAT DOWNLOAD FREE
MEEQAT SALAT DOWNLOAD FREE
VUELIE FROZEN DOWNLOAD
KALE LAGAI MADU WASANTHE DOWNLOAD FREE
DOTA 6.80C MAP DOWNLOAD FREE
AHISTA PUKARO SAB SUN LENGE SONG FREE DOWNLOAD